Shiinaha ASRS Soo-saar iyo Warshad | Huade
Nidaamka keydinta otomaatiga ah iyo dib u soo celinta (AS / RS)
Nidaamka keydinta otomaatiga ah iyo dib u soo celinta (AS / RS) badanaa wuxuu ka kooban yahay sagxadaha dhaadheer, wiishashka wax lagu dhejiyo, gawaarida wax lagu raro iyo nidaamka xakamaynta bakhaarka kuwaas oo dhexgalaya nidaamka maaraynta bakhaarka. Mararka qaar wiishka wiishka ayaa ku shaqeyn kara baska si loo sii kordhiyo qoto dheer ee santuuqa (dabcan wax soo qaadista ayaa la dhimayaa), Qaabeynta caadiga ah ee AS / RS waxay la shaqeysaa hal kalluun oo qoto dheer ama labalaab ah.
Maaddaama wiishka wiishku uu gaari karo dhererka ka sarreeya 30 mitir, AS / RS waxaa badanaa laga codsadaa bakhaarrada dhaadheer si ay si buuxda uga faa'iidaystaan ​​booska qiyaasta dhererka. Bakhaarka dhererkiisu hooseeyo, AS / RS laguma talinayo sababtoo ah marinka wiishka wiishku wuxuu fadhiyaa meel bannaan oo gaar ah, taas oo ka dhigaysa cufnaanta keydku inay ka hooseyso sidii aan fileynay.
AS / RS waxay u heellan tahay hagaajinta keydintaada iyo dalbashada hawlgallada xulashada. Iyada oo otomaatig ah hawsha si fudud loogu celceliyo ee keydinta iyo dib u soo celinta, AS / RS waxay keentaa faa'iidooyin badan oo xoog leh oo ay ka mid yihiin:
Cufnaanta kaydinta ee ugufiican Badbaadada oo hagaagtay
Helitaanka degdegga ah iyo soosaarka oo kordhay Dayactir-saaxiibtinimo sababtoo ah tayo sare leh, walxaha mashiinka la xaqiijiyay
Hoos udhaca kharashaadka shaqada iyo yaraanshaha shaqa la'aanta Naqshad naqshadeysan oo qaabeysan oo loogu talagalay dabacsanaanta ugu badan
Saxsanaanta xulashada dalabka Isdhexgalka nidaamka ERP ee jira waa la beddeli karaa
AS / RS sidoo kale waxaa badanaa loo isticmaalaa bakhaarka dharka xirxira (dhismaha rack taageeray), dhismaha rack xiran waa isbeddel ku cusub warshadaha saadka, waxay keydineysaa ilaa 20% kharashka dhismaha iyo dhowr bilood oo dhismaha ah bakhaarka. Qaabdhismeedka xargaha goos gooska sare ee AS / RS ayaa si fiican u taageeri kara bakhaarka oo ah qaab dhismeedka birta, waxa kaliya ee aan u baahanahay ayaa ah xisaabinta iyo xulashada tilmaamaha saxda ah ee loo yaqaan 'racking specifications', qaabdhismeedka rack wuxuu la wadaagi karaa shuruudaha rarka ee tiirarka bakhaarka.
Tan iyo markii 1st Mashruuc xirxiran oo ka kooban 40 mitir sare oo dhisme ah oo taageersan macmiilkeena Kuuriya sanadkii 2015, Huade wuxuu uruursanayay qibrad badan oo ku saabsan mashaariicdan oo kale, 2018 Huade wuxuu dhisay 30 + mitir bakhaar rakhiis sare leh oo leh 28 wiishashka wax lagu dhejiyo ee weyn. - macmiilka ganacsiga ee Hangzhou, sannadkan 2020 Huade wuxuu leeyahay 4 mashruucyo waaweyn oo huwado ah oo isku mar la wada fulinayo, oo ay ku jiraan mashruuc 24 mitir ah oo sarreeya oo ay weheliso 10,000 oo xarig been ah oo ku yaal Bejing, oo ah AS / RS oo xidhan oo wata 5328 goobood oo ku yaal Chile, 35 mitir sagxad sare oo xidhan AS / RS ee Bangladesh iyo 40 mitir shaybaarka otomaatiga sare ee Huade warshad u gaar ah.
Hore: 4-Jidka Shuttle
Xiga: Nidaamka Xamuulka Shidaalka